Aqeela Asifi: Mpampianatra iray Manohy Mitolona Any An-tSesitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2016 3:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, bahasa Indonesia, Español, русский, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Aqeela Asifi miresaka momba ny làlana nodiaviny. Sary: Varkey Foundation Global Teacher Prize / YouTube
Alaivo sary ao an-tsaina ny hoe mpampianatra iray, 23 taona, ao aminà toby kely iray misy ireo mpitsoaponenana Afgàna ao an-tanànan'i Kot Chandana, any amin'ny manodidina ny faritanin'i Punjab ao Pakistàna, ary avy eo, indray andro, nahalàla fa Stephen Hawking mihitsy no nidera anao sy ny asanao . Aqeela Asifi—iray amin'ireo folo sangany amin'ny Global Teacher Prize amin'ity taona ity (loka manerantany omena ny mpampianatra)—no nahatsapa io fihetsehampo io. Tao anaty lahatsary iray nalefa tao amin'ny pejy Facebook-n’ilay fifaninanana, no nambaran'ny Profesora Hawking ireo voafantina farany tamin'ity taona ity, ary isan'izy ireny i Asifi.
Lazain'ny tranokalan'ilay fifaninanana fa isan-taona ilay loka no omena ho an'ireo mpanabe tena niavaka :
Loka mitontaly 1 tapitrisa dolara ny Global Teacher Prize, atolotra isan-taona ho an'izay mpampianatra niavaka nahavita fandraisana anjara niavaka teo amin'ny asan'izy ireo. Atao hanasongadinana ny lanja mavesatra ananan'ireo mpanabe ilay loka, ary ny zavamisy hoe, manerana ny tany, mendrika ny hankasitrahana sy hankalazaina ny ezaka ataon'izy ireny.
Azo lazaina ho tsotra ny fiainan'i Asifi ao Afganistàna. Avy aminà fianakaviana nanohana hatrany ny zony hahazo fanabeazana izy, na teo aza ireo fanambin'ny kolontsaina. Faly amin'ny asany maha-mpampianatra azy ao Kabul izy, mandra-pandrain'ireo Taliban ny fahefana, ka nahatonga azy tsy afaka nanatanteraka ny asany. Nahita toerana masina tany Pakistàna i Asifi sy ny ankohonany ny taona 1999, tamin'ny fanantenana hoavy tsara kokoa sy azo antoka.
Tao aminà toby iray misy ny mpitsoaponenana Afgàna izy no nanomboka ny tolony feno fahasahiana sy tsy nahalalàny sasatra mba hanabe ireo ankizivavy Afgàna mpitsoaponenana. Voaporofo fa tena tsy asa mora izany, ary vetivety foana dia tsapan'i Asifi fa olona tsy manana fahalalàna ny amin'ny zon'ny ankizivavy mba hahazo fanabeazana ireto ifampiresahany. Tao anaty tafa iray niarahany tamin'ireo mpikarakara ny Global Teacher Prize, nofintinin'i Asifi ny làlana nodiaviny :
Rehefa nanontaniako ireo ankizivavy ny antony tsy naha-tany an-tsekoly azy ireo, dia nambarany'izy ireny fa tsy any an-tsekoly no heverina hisy azy ireo.
Tsy nitandro hasasarana, nametraka efitrano kely fianarana tao amin'ilay tobin'ny mpitsoaponenana i Asifi, izay efa nampianarany nandritry ny taona maro izao, nandraisany loka maro samihafa avy amin'ny asany. Efa ela tokoa izy no nanao ilay asa ka efa manomboka mihitsy aza mampianatra ny zanaka vavin'ireo andiany voalohany tamin'ny mpianany fahiny:
Ankehitriny, mandefa ireo zanany vavy ho aty an-tsekoliko ireo ankizivavy mpianatro tamin'ny 20 taona lasa, araka izany dia mampianatra ny andian-taranaka faharoa amin'ireo mpianatro aho.
Tamin'ny Desambra lasa teo, nisidina ho any Pakistàna i Lili Mao, mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Sampam-pianarana momba ny Fitantanana Fahitalavitra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Drexel, mba handrakitra an-tsary an'i Asifi eo amperinasa miaraka amin'ireo ankizivavy Afgàna. Lazain'i Mao fa vavolombelona nahita maso ny firohotan'ireo ankizivavy mba hahazo fanabeazana izy. Nambarany tamin'ny gazetin'ny anjerimanontolony fa :
Nitafa tamin'ny sasany tamin'ireo ankizivavy tao an-tsekoliny aho, ary nifampizaràn'izy ireo tamiko ny nofinofiny. Nilaza ny ankizivavy iray fa maniry izy ny ho mpampianatra, mba hahafahany mampianatra ireo ankizivavy hafa mpitsoaponenana, toy ny ataon'i Asifi. Ankizivavy iray hafa no nilaza fa maniry ny ho lasa mpitsabo mba hanompo ny fireneny.
Malala Yousafzai, ilay nahazo ny Loka Nobel tao Pakistàna, malaza amin'ny fampiroboroboana ny zo iraisana amin'ny fahazoana fanabeazana, dia nifandray koa tamin'i Asifi, niarahaba azy tamin'ny alàlan'ny antso an-telefaona noho ny naha-tafiditra azy ho isan'ireo voafantina farany amin'ny Global Teacher Prize. Nampita ny firariantsoany ihany koa ho an'i Asifi i Ziauddin Yousafzai, rain'i Malala Yousafzai, tamin'ny alàlan'ny Twitter:
Miarahaba an'i Aqeela voafantina ho amin'ny dingana faran'ny Global Teacher Awards & sy ny asa fanabeazana ataony izahay sy Malala
Tsy voalohany izao i Asifi no nankasitrahana noho ny asany. Tamin'ny 2015, natolotra ho isan'ireo hofantenana hahazo ny Nansen Refugee Award avy amin'ny United Nations High Commissioner for Refugees’ izy.
Mahazendana, sekoly sivy ankehitriny no tantanan'i Asifi, misy eo amin'ny 900 mpianatra eo.
Tamin'ny fo feno fitiavana no niarahaban'ireo mpampiasa aterineto manerana an'i Pakistàna ny fanendrena azy :
Mangetaheta ny hihaona amin'ìi Asifi aho, ilay tompondaka feno fahasahiana sy tsy mahalala sasatra manabe ny ankizivavy Afgàna #mpitsoaponenana ao #Pakistàna
PAKISTANE iray tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo SANGANY FOLO nofinidin'i Stephen Hawing amin'ny Globa Teacher Prize. Arahaba ry Aqeela Asifi
Arahaba atolotra an'i Aqeela Asifi noho ny nahatafidirany ho ao anatin'ireo 10 farany voafantina amin'ny Global Teacher Prize
Mirehareha manana vehivavy be herimpo toa an'i Aqeela Asifi. Ho feno hery hatrany anie ny olona tahaka ireny
Vitan'i Aqeela Asifi avy ao Pakistàna ny tonga amin'ny famaranan'ny Global Teacher Prize
Ireo hafa tonga amin'ny famaranana, nofantenana avy amin'ireo 8.000 nandray anjara, dia ahitàna mpampianatra avy any Palestina, India, Etazonia sy Angletera, Kenya, Finland, Aostralia, ary Japàna. Hambaran'ny Global Education and Skills Forum amin'ny 13 Martsa 2016 any Dobai ny anaran'izay hivoaka ho mpandresy amin'ilay fifaninanana. Na ho inona na ho inona no ho vokany eo, efa nahazo fo maro sahady i Asifi noho ny asa fanabeazana ataony, ary tsy mbola mifarana eo ny diany.